China TCD Cyclo Vortex Pump (Repalce TC) vagadziri uye vanotengesa | damei kingmech pombi
Unyanzvi: 3-1400m3 / h
Zvinyorwa: Cr27, Cr28, CD4MCu,
Iyo TCD Pumps yakagadzirirwa chaizvo kuti ishandiswe mukushandisa mune slurry mhando mafomu ane akakura kana kuputsa tunhu tudonhwe. Iyi nhanho yemapombi evortex inokwanisa kubata makuru uye akapfava zvidimbu, kunyanya panowanikwa kushatiswa kwechinhu. Iyo hombe vhoriyamu yemukati profiles, inosanganisirwa neyeyakavhurika yakavhurika impeller dhizaini, inoderedza kushamwaridzana kwekubatana uye kudzikisira angangoita anovharika.
Dhizaini uye Akasarudzika maficha
1. Iyo isina kusunganidzwa yese-simbi dhizaini yezvinyoro-kumagumo zvikamu zvinokodzera kune ese ari horizontaland akamira dhizaini dhizaini.
2. Iyo yakasarudzika yakadzoserwa dhizaini dhizaini inogadzira yemukati vortex, iyo inoendesa simba kune iyo yepakati iri kupombwa. Iyi "nyoro" yekuchinjisa yemagetsi inoganhurira huwandu hwesanganiswa yekudzikira zvakanyanya kana ichienzaniswa nemapombi akajairwa.
3. Zvivezwa zvakaenzana zvakaenzana uye zvitoro zvinotarisisa hukuru hukuru hwekuti pombi inogona kugadzirisa kudzikama kwezvimisikidzo zvinogona kumuka kana uchipomba zvidimbu zvikuru.
4. Iyo hombe vhoriyamu casing dhizaini inoderedza ma velocities anowedzera kudzikira kusakara uye kusviba kwechinhu.
5. Makereke akasimba anotakura, anosanganisira anorema-basa taper rollers, shoma shaft overhang uye kuomarara yakakura dhayamita miseve inobatsira kunetseka kusununguka kushanda pane ese akatwasuka uye akamira masisitimu.
6. Iyo yakasarudzika "-10" (dash 10) yekupedzisira-kavha gungano ine V-Seals, kaviri pisitoni mhete uye yekunze flinger ine mafuta akazora labyrinths yakajairwa mune yakatwasuka inotakura magungano.
7. Kuwanika kwegadziriro yakamira yekumonera chakaringana uye urefu hwe shaft hunosiyana zvichienderana neyakajairika pombi dzeWarmanVSD (SP) uye VSDR (SPR).
Carbon Transfer Mabasa
Tsvina uye Inobudirira
Yakadzika Sheari Mabasa
Pashure: SSD Inonyudza Pombi
Zvadaro: VFD Vertical Froth Pump (Repalce AF)
DGD Dredge Pump yeSand uye Gravel Pump (Repal ...